रुघाखोकीबाट बच्न कसरी अपनाउने सतर्कता ? – Lokpati.com
प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल अपराध पक्राउ नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली सरकार नेकपा अमेरिका चितवन मृत्यु प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली काँग्रेस
रुघाखोकीबाट बच्न कसरी अपनाउने सतर्कता ?
By लाेकपाटी न्यूज On ४ कार्तिक २०७६, सोमबार १२:१५
मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न किसिमका शारीरिक समस्या आउन सक्छ। बालबालिका, रोगी, बुढाबुढी वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएकाहरुलाई सानोतिनो समस्याले दुःख दिन सक्छ। त्यसैले यतिबेला स्वास्थ्यप्रति सचेत र सर्तक हुन आवश्यक छ।
यो मौसममा रुघा अर्थात कमन कोल्डले सताउन सक्छ। यो त्यती गंभिर समस्या त होइन, तर यसले निकै दुःख भने दिन्छ। त्यसैले रुघा कसरी लाग्छ, रुघा लागेमा के हुन्छ, यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा केही ध्यान दिनु उत्तम हुन्छ।
तपाईं, हामीलाई थाहा नै छ, रुघा लागेपछि नाकबाट पातलो सिंगान जस्तो पानी बगिरहन्छ। सामान्य ज्वरो पनि आउँछ। साना बालबालिका वा बुढाबुढीलाई यसले निकै सताउँछ। सामान्य व्यक्तिलाई भने दैनिक कामकाजमै असर पुर्‍याउँछ। रुघा र ज्वरोले सताउन थालेपछि हिँडडुल गर्न, काम गर्न सहज हुँदैन।
सामान्यत रुघाखोकी राइनो भाइरसको संक्रमणले हुने गर्छ। प्रायजसो यस रोगको संक्रमण एक हप्तामा आफै निको हुन्छ। सामान्य भाइरसको संक्रमणले हुने समस्या भएकाले एन्टिबायोटिक खाइहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन।
यद्यपि कहिले काहीँ के हुन्छ भने, मान्छेको उमेर, शारीरिक अवस्था, रोगसँग लड्ने क्षमता आदिको कारणले उक्त भाइरसको संक्रमण पछि सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने संभावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा भने एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हुन्छ।
रुघाखोकीबारे हामी त्यती अनभिज्ञ छैनौं। यो समस्या हुँदा खोकी लाग्छ, नाकबाट पानी बग्छ। बेलाबखत छाती, टाउको, शरीर पनि दुख्छ। बच्चाहरुमा चाहि यसको असर अरु बढी देखिन्छ। उनीहरुलाई पेट पनि दुख्न सक्छ। वान्ता हुने, पखला लाग्ने समस्या हुन्छ। रुघाखोकीकै कारण ज्वरो पनि आउँछ।
रुघाखोकी एकबाट अर्कोमा सर्ने हुँदा कहिले काहीँ पुरा परिवार नै बिरामी पर्छन्। त्यसैले रुघा लागेपछि एकअर्काको सोझो सम्पर्कमा रहनु हुँदैन। सरसफाई र आरममा बढी ध्यान दिनुपर्छ।
रुघाखोकीकै कारण धेरै ज्वरो आएमा प्यारासिटामोल दिनु उपयुक्त हुन्छ। सामान्यत बच्चाहरुमा दिनमा २, ३ पटक भन्दा बढी पातलो दिसा लागेमा उनीहरुलाई झोलिलो तथा पोषिलो खानेकुरा दिनुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा पुनरजलिया झोल दिनुपर्छ।
रुघाखोकीले गर्दा बच्चाहरुलाई श्वसप्रश्वासमा समस्या आउन सक्छ। उनीहरुलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। यदि त्यसो भएमा नुन पानीको थोपा नाकभित्र राख्नुपर्छ, केही सहज हुन्छ। नरम सुतीको कपडाले नाक पुछिदिनुपर्छ।
यसैगरी तातो पानीमा नुन, बेसार, ज्वानो, तुलसीको पात, जिरा र अदुवा राम्रोसँग उमालेर मनतातो भएपछि पउक्त पानीमा केही मात्रा कागतिको रस राख्नुपर्छ। उक्त रस दिनमा तीन, चार पटकसम्म सेवन गर्दा रोगबाट छिटो छुटकारा पाउन सकिन्छ।
पिउने पानीमा ध्यान दिने। शुद्धिकरण गरेको पानी मात्र पिउने। पर्याप्त पानी पिउने।
भिडभाडमा जानु परेमा माक्सको प्रयोग गर्ने।
सरसफाईमा ध्यान दिने। फोहोर बस्तु छोएपछि, दिसापिसाब गरेपछि, बालबच्चालाई दिसापिसाब गराएपछि साबुन पानीले राम्ररी हात पखाल्नुपर्छ।
रुघाखोकीबाट राहत पाउनको लागि १ गिलास तातो दुधमा १ चम्चा बेसार मिसाएर पिउनुहोस्। यसको साथै सुकेको हलेदोलाई पोलेर त्यसको धुँवा सुँघेमा पनि रुखाखोकी ठिक हुन्छ।
तुलसी रुघाखोकीको लागि कुनै औषधिभन्दा कम छैन्। तुलसीको चार पाँच पत्ता तुलसी चपाउनाले घाँटीको खसखर र खोकीबाट राहत मिल्छ। तपाई यसलाई चिया वा तातोपानीमा उमालेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ।
अदुवाको रस महमा मिसाएर खाएमा पनि खोकी टाढा भाग्छ। तपाईलाई रुघाखोकीले सताएको छ भने राती सुत्नभन्दा अगाडि दूध वा चियामा अदुवा उमालेर पिउनुहोस्। तर्पाको स्वास्थ्यमा छिटै सुधार हुन्छ।
अलैंचीलाई चियामा उमालेर पिउनाले रुघाखोकी ठिक गर्छ। यदि फेरि पनि रुघा लागेमा अलैंचीको दानालाई रुमालमा बेरेर सुँघ्नाले रुघाबाट छुटकारा पाइन्छ।
टाउको दुख्ने, खोकी, ज्वरो, रुघा जस्ता समस्या देखिएमा हर्बल चिया पिउनुहोस्। यसले शरीरलाई गरम राख्छ र रोगबाट बचाँउछ।
त्यस्तै रुघाखोकी लागेमा तातोपानीको बाफ लिने, तातो पानी पिउने, रसभएको तातो खानेकुरा खाने गर्नुभएमा यसले पनि आराम गर्छ।
आजको बिदेशी मुद्राको विनिमयदर